Hushboard: chirongwa chinoshanda chekusarekodha uchitaipa | Linux Vakapindwa muropa
Chokwadi pane dzakawanda nguva iwe urikurekodha chimwe chinhu uye iwe unoda kunyaradza maikorofoni iwe paunenge uchitaipa kuitira kuti kurira kwekhibhodi kusanzwikwe. Asi kumisa maikorofoni kana iwe ukatanga kutaipa pabhodhi rako uye kuitazve kana wapedza hazvibatsire, izvo zvingave zvisina kugadzikana dai zvisiri zvezvirongwa zvakaita Hushboard.
Nechirongwa ichi chitsva, unogona kugadzira yako Linux distro maikorofoni inonyatsochinja ichinyora uye zvinobva zvaitika zvekare paunomira kunyora. Nekudaro, zvinyorwa zvako zvichabuda zvakakwana, pasina ruzha rwekiyi makiyi ako achirova. Uye zvakare, iwe unogona zvakare kuishandisa mumavhidhiyo mafoni, ayo anogona kuve anonakidza ekushandisa teleworking.
Icho chiri nyore kunyorera uchishandisa PyGTK3 kuisimbisa mumenu yedesktop yako, munzvimbo iri pamusoro, uye ichagara yakamirira kuti utange kunyora kumisa maikorofoni pasina kana chaunofanira kuita. Uye zvakare, iwe unogona kuona kuti iri kushanda nekutenda kune iyo Hushboard icon inoratidza chinzvimbo: chakaitwa kana chadzimwa. Unogona kudzvanya pairi kuti ubve mairi uye kurega kuishandisa.
Kuita kuri nyore kwazvo izvo shandisa PulseAudio kushanda, uye iyo parizvino yakarongedzwa kune akasiyana ma distros uchishandisa Snap parquet, uye zvakare muAUR yeArch Linux. Nekudaro, muUbuntu inozoshanda nekumira zvirinani kupfuura vamwe, nekuti, semuenzaniso, Ubuntu ine zvimwe zvinowedzera muGNOME izvo zvinodiwa kuti chiratidzo chiwoneke pachiratidziro, senge AppIndicator uye KStatusNotifierItem Tsigiro. Izvo zvingave zvakakwana ...
Kana uchifarira gadza Hushboard pane yako distro, iwe unogona kuwana iyo package Tora kubva pano. Kana zvakare ku AUR kana iwe uri kushandisa Arch Linux kana zvigadzirwa. Uye kana iwe uchida kuiisa kubva iyo dhairekodhi, unogona zvakare kushandisa iyi imwe link kune iyo GitHub saiti ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Multimedia » Hushboard: chirongwa chinoshanda chekusarekodha uchitaipa